Golaha ammaanka oo Eretria ugu baaqay in baaritaano lagu sameeyo eedaymaha Kenya ay u soo jeedisay. – Radio Daljir
Golaha ammaanka oo Eretria ugu baaqay in baaritaano lagu sameeyo eedaymaha Kenya ay u soo jeedisay.
Washington, Nov, 19 ? Golaha ammaanka ee QM ayaa markii ugu horaysay bayaan ka soo saaray eedeymihii ay isku soo jeedinayeen xukuumaddaha Kenya iyo Eretria, kaasi oo ku aadan in Eretria ay Al-shabaab ku deeqday hub iyo saanadd miletari.
Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay Mr Banki Moon ayaa Eretria ugu baaqay inay ogolaato in arrinta la xiriirta xiriirka Eretria iyo Al-shabaab lagu sameeyo baaritaan, isla markaana Golaha Ammaanku ay ergo baarta arrintaasi u diraan dalalka Kenya iyo Eretria.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Eretria ayaa durbadiiba ka jawaabay bayaanka ka soo yeeray QM, waxaana uu tilmaamay in baaritaankaasi ay duwladdiisu ay diyaar u tahay, waxaase uu wax-lala yaabo ku tilmaamay hadalada ka soo yeeraya xukuumadda Kenya, oo uu ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn.
Dhawaan ayay ahayd markii xukuumadda Kenya ay dalka Eretria si toos ah ugu eedeeysay inay 3 diyaaradood oo hub ah ka dajisay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, kuwaasoo siday hub iyo saanad milatari.